Vorotynsky isitini isitshalo: umlando, imikhiqizo, ikheli
Vorotynsky isitini kwemboni, ingxenye JSC "Stroypolimerkeramika" iveza ukwakhiwa high. Lunye ibhizinisi kukhiqizwe ambozwe, okungenalutho, izitini okuqinile anemibala ehlukene kanye indlela yokwenza.
Ngo-20-yalolucwaningo of emzaneni XX leminyaka Vorotynsk (Kaluga esifundeni) waba isikhungo yokukhiqiza izitini tile Ceramic. Ekuqaleni kwaba ukukhiqizwa Artisanal zonyaka, ukuqinisekisa izidingo ezindaweni eziseduzane. Ngo-1944 kwaqala ukwakhiwa kwamabhizinisi agcwele esekelwe ezifakwa ocebile high nobumba.
Yokutakula komnotho edingekayo imiqulu okungakaze kubonwe zokwakha. Ngo-1946, lesi sitshalo zilethwe batch lokuqala izitini. Ukuze uthuthukise ukusebenza kule-yalolucwaningo 50 iqhutshelwe phambili lo nokukhanda lomjikelezo ukukhiqizwa, ukwakha Bocca kuhhavini enamandla wokubhaka izitini.
Eminyakeni 1957-1960 Vorotynsky isitini ifektri kabusha. Ngaphansi kohlelo lokuhlelwa kabusha, amandla alo lenyuka lisuka kwabangaba 2 ukuze izitini kwezigidi ezingu 12-14 ngonyaka. Ngesikhathi ingqalasizinda esifanayo kuvuselelwe, eyakhiwa kabusha imigwaqo nemizila inkampani wabeka kujantshi.
Esikhathini '70 amandla IBD liye landa ngamaphesenti isigamu - kumayunithi kwezigidi ezingu-28. Ivula umshayeli isitshalo imikhiqizo polymer. Phakathi kwezindonga zayo zenziwe metal-base ne polyethylene enamathela (okokuqala e-USSR), izitini ebhekene, okwesikhashana Uphahla lwangaphakathi, fiberglass nokuningi. Inkampani yayisiboshwe kaningi ewina diploma ye Enea.
Ngo-1985, uhulumeni wamaSoviet awuzange ethunywe based Vorotynsky Pilot Plant ukudala kwekulu imaphakathi amabhizinisi cluster, okuzokwenza ihlanganise ubuchwepheshe eziphambili kakhulu ekwakheni. It otshalayo:
Ukuze kukhiqizwe linoleum.
imikhiqizo yenhlanzeko futhi sobumba.
Bobumba odongeni izinto.
Eminyakeni emibili ngo-1989 babehlanganiswe Vorotynsky brickyard "Stroypolimerkeramika" - amabhizinisi ezikhethekile elikhulu esifundeni, akwazi kuze kube izitini ezingu-75 ngonyaka.
Xxi Century IBD wahlangana, njengoba omunye wabaholi umkhakha. Vorotynsky ebhekene isitini ithandwa kakhulu eRussia. Ubuchwepheshe kanye nemishini athuthukiswe ngokubambisana nabalingani isiNtaliyane, ikhumbula izici ubumba wendawo. Ngo-2008, "Stroypolimerkeramika" baba yingxenye yeqembu kwezezimboni isikali federal "Tashir".
Vorotynsky brickyard njalo ekuthuthukiseni impahla kanye imishini yezobuchwepheshe. Workshop kuyaqedwa ne ephezulu zokukhiqiza imigqa kusukela best abakhiqizi stroyoborudovaniya. Omunye zigqila zokugcina kwaba ekushoniseni umugqa adubula ngezitini. Ngenxa wakhe, ingozi "kudutshulwa" on the front ebusweni lincishisiwe. Okwamanje, IBD ulakho ukukhipha ngoba ngonyaka amayunithi ezingu-100 ukuze. Ngenxa yale njongo enkwalini ifektri misela amathani 125.000 ngobumba.
Le nkampani ine laboratory ayo egunyaziwe, okuyinto isikhungo ucwaningo agcwele. abasebenzi Laboratory olwenziwa isilawuli multi-level of lonke ukukhiqizwa chain, kusukela Ukwakheka kwamakhemikhali kanye izakhiwo zobumba ziphethe ukuhlolwa olunzulu umkhiqizo osuphelile emanzini ukumuncwa, isithwathwa ukumelana nokuqina kwayo.
IBD ngenkuthalo ukusebenza kokubili izinhlangano kanye nabasunguli ngabanye. Factory imikhumbi izimpahla ngomgwaqo kanye isitimela / wesitimela. Iyalayisha Kwenziwa ubusuku nemini.
Vorotynsky isitini imboni ekhiqiza isitini nge Iphalethi ocebile imibala kanye indlela yokwenza, libhekene namandla high, ukunemba ntathu, ihlala isikhathi eside. Ububanzi siqukethe cishe 50 zilwane. Ziyakwazi:
ngenhloso ngaphandle impumuzo;
Ukwakhiwa simila baziwa ingcebo imibala yemvelo ubumba: kusukela obomvu zakudala kanye peach ukuba ubumba kanye notshani. Naphezu ukufohla ubuchwepheshe of namashumi okugcina eminyaka, Vorotynsky isitini namanje oluqanjwe ukubumba kwenkampani iphinde idilize ubumba evamile.
Umdwebo obonisa ngakuthathu kubhekwa eliphezulu kakhulu. I impahla eluhlaza ixubene udayi ukuze mass iyunifomu ngaphambi kokufaka eziko. Ngenxa yalokho, umbala umkhiqizo ngaphakathi nangaphandle baqiniseka ezifanayo. Uma ufuna usinqampule, noma kwakukhona chipped kancane, umbala isitini ngeke kushintshe. ezihlukile nangebala nazo izuzwe ushintsho izingoma encane mode, isikhathi processing kokudubula.
Uma ufuna izitini eliphezulu - ngeke Vorotynsky brickyard. Ikheli: 249201, Kaluga esifundeni, Babyninsky District, isigodi Vorotynsk, Factory emgwaqweni 1.
Quality ngaphezu kwakho konke
Ngenjongo elungiselelwe tekusebenta mpahla isitini ishede liqukethe indaba encane kakhulu edingekayo isitokwe, okuyinto sisetshenziswa uphawu onensika Nciphisa ifilimu yokugcina. Umugqa ngamunye izitini has a gasket lephepha ekhethekile. Eliphezulu emaphaketheni ivumela isikhathi eside ukugcina imikhiqizo ngaphandle kokulahleka ungubani, futhi ngeke wesabe "imithwalo" yokuhamba.
IBD uye wasebenzisa ngempumelelo global uhlelo isampula izinga. Imikhiqizo iyahlangabezana nezindinganiso isimo yasekhaya, ephelezelwa isitifiketi sokuhambisana, sanitary izinga isiphetho iphasiphothi. Minyaka yonke imikhiqizo isitini kusukela Vorotynsk enqoba degrees ehlukene kahulumeni kanye nezisebenzi zokwakha zomhlaba wonke amathenda, ikakhulukazi - "Mkhiqizo Kuhle Kakhulu Onyakeni".
Concord - indiza ka esikhathini esizayo?
Ukuphuca idatha banikele: Uhlolojikelele, izici kanye nokuzikhethela ubuchwepheshe
Okusemqoka ukupheka. Indlela ukuhlanza boletus
Ihhotela Atlantica Thalassaki 4 * (Ayia Napa): Izibuyekezo
Ukungabi namizwa izinzwane
I-hypochondriacal neurosis: izimbangela, izimpawu kanye nokwelashwa
Economist American uPawulu 'uSamuelson: wemiqondo eyisisekelo, ithiyori kwezomnotho kanye biography
Panama - ezweni ehlobo okuphakade
"Mens Formula": ngaphezu kuka-multivitamin